तपाइको सोच त बलिउड होइन, साउथ मै पुगेछ नी निर्देशक ज्यू – Mero Film
तपाइको सोच त बलिउड होइन, साउथ मै पुगेछ नी निर्देशक ज्यू
२०७५ वैशाख १६ गते १२:४४
फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’को ट्रेलर रिलिजको दिनमा निर्देशक विशाल भण्डारीलाई पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए कि, तपाइको फिल्मको रोमान्टिक गीतको भिडियोको सुरुवाती अंश बलिउड फिल्म ‘रइस’सँग मिल्छ नी ? यसमा विशालको भनाई थियो, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । यदि, मिली हाल्यो भने मेरो सोच पनि बलिउड स्तरको भएछ भनेर सोच्नु पर्यो नी होइन ?
विशालले गीतको भिडियो हिन्दी फिल्मको भिडियोबाट प्रभावित भएको समेत स्विकार गरेनन् । तर, अहिले फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ रिलिज भएपछि यसको चर्को आलोचना भैरहेको छ । यो फिल्म सन. २००५ मा निर्माण भएको साउथ इन्डियन फिल्म ‘मुम्बइ एक्सप्रेस’बाट कपि भएको समिक्षकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् । फिल्मको समिक्षामा यो फिल्म चोरिएको भनिएको छ । दर्शकले पनि साउथ फिल्मबाट यो फिल्म चोरिएको बताएका छन् ।
गीतपछि अहिले पुरै फिल्मलाई नै चोरीको आरोप लागिरहेको छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी दृश्य मिलेको भन्दै समिक्षहरुले निर्मात्री केकी अधिकारीको छनोटमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् । गीतको भिडियोको अंश मिल्दा आफ्नो सोच बलिउडसँग मिल्न गएको भन्ने निर्देशक विशाल भण्डारीले अब के भन्लान् ? कि फेरि भन्लान्, मेरो सोच बलिउडमा मात्र होइन, सिंगै साउथ इन्ट्री लेभलको रहेछ ।